ओली बिना अघि बढे नेकपा फुट्छ, यो व्यवस्था ढल्छ ! – Khula kura
काठमाडौँ – नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट अष्टलक्ष्मी शाक्यले अगाामी स्थायी कमिटी बैठकमा ओली सहभागी नभएमा उनले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने ठहर गरेकी छन् ।
आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी नभएर पत्रबाट अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने अडान पठाएका ओली आगामी बैठकमा पनि उपस्थित भएनन् भने पार्टी अनिर्णयको बन्दी नबन्ने बताएकी हुन्।
उनले भनिन्, ‘सकेसम्म हामीले सहमति गर्ने भनेका छौँ। तर बैठकमै सहभागी नहुनेलाई दलको नेता भन्न मिल्छ ? उहाँले हामीहरुलाईसमेत अपमान गर्नु भएको छ। आगामी बैठकमा उहाँ आउनु भएन भने उहाँले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने छ।’
नेता शाक्यले ओली आफ्ना तमाम गल्तीहरुका कारण झनझन कमजोर भएको र आफूहरुसँग सामना गर्ने शक्ति गुमाइसकेको समेत निष्कर्ष सुनाइन्। ‘प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्टी कार्यालयमा आउन नसक्ने स्थिति बन्यो। उहाँलाई कस्तो सुरक्षा थ्रेट हो यो ? अर्कोतिर उहाँले हामीसँग केही सिप नलागेर हारगुहार गर्नु भएको छ, विवेकपूर्ण निर्णय लिनु भनेर। यो कस्तो प्रवृति हो ?
ओलीबिना बैठक बस्दा नेकपा फुट्न सक्छ !
स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली बैठक अघि बढिसकेकाले अब नरोकिने बताउँछन् । स्थायी कमिटी बैठक मङ्सिर २८ गतेसम्मलाई स्थगित छ । त्यो समयमा सदस्यहरूले सबै प्रस्तावहरू अध्ययन गरिसक्ने र २८ गतेपछि धारण राख्ने क्रम सुरु हुने उनी बताउँछन् ।
“बैठक मुलुक र आन्दोलन, संविधान र अहिलेसम्मका उपलब्धिप्रति संवेदनशील छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षलाई सहमतिमा नल्याइ बैठक राख्दा कतै नेकपा टुटफुट होला र व्यवस्थामै असर पुग्छ कि भनेर हामी सदस्यहरू पनि संवेदनशील छौं,” ज्ञवाली भन्छन्, “तर, ओलीमा त्यो संवेदनशीलता देखिएन । मैले जे भन्छु त्यही हुनुपर्छ । मैले भनेको नहुने हो भने सबैकुरा बिग्रिए पनि बिग्रियोस् भन्नेजस्तो चिन्तन देखिन्छ ।”
पार्टीभित्र आलोचना, आत्मालोचना, असहमति हुने त्यसलाई विधिसम्मत हल गर्नुपर्नेमा ओलीले निषेधको नीति लिएको ज्ञवालीको ठहर छ । प्रचण्डको प्रस्ताव पार्टी कमिटी हुँदै सदस्य र जनताको हातहातमा पुगिसकेकाले त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ भन्नुको कुनै तुक नरहेको र औचित्यहीन कुरा भएको उनको भनाइ छ ।
“दुईवटा दल मिलेर बनेको विशाल पार्टी छ । हिजोका अन्तरविरोधहरू पनि सँगै आएका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा नयाँ अन्तरविरोध देखापरेका छन्,” उनी भन्छन्, “त्यसलाई हल गर्ने भनेको व्यक्ति विशेष छलफल गरेर, एक–दुईजना नेता बसेर होइन । कमिटीको प्रणालीमार्फत् हल खोज्नुपर्छ । विधिका आधारमा समाधान खोजिनुपर्छ ।”
उनले बैठक प्रक्रियागत ढङ्गले अघि बढिसकेकाले नरोकिने जिद्दि गरे । सहमतिका नाममा बैठकलाई अनिर्णयको बन्दी राख्न नमिल्ने बताउँदै विधानको मर्म र भावनाअनुसार कमिटी अघि बढ्ने निष्कर्ष सुनाउँछन् ।
“बैठक सुरु भयो । अब अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक गर, नगर, भनेर हुँदैन । बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत भइसक्यो । विषयवस्तु प्रस्तुत भइसक्यो,” उनी भन्छन्, “अब २८ गतेबाट दस्तावेजमाथि आफ्ना विचार राख्छौं । बैठकमा कोही जाने, आउने, बस्ने, नबस्ने हुनसक्छ । तर, निर्णय रोकिँदैन । सकेसम्म सहमति नत्र विधि ९बहुमत०बाट भए पनि निर्णय हुन्छ । यो नै हाम्रो स्थापित अभ्यास हो ।